बार्यनविरुद्ध रोनाल्डोको हृयाट्रिक, रियल मड्रिड सेमिफाइनलमा. – Sabaikoaawaj.com
बार्यनविरुद्ध रोनाल्डोको हृयाट्रिक, रियल मड्रिड सेमिफाइनलमा.
बुधबार, बैशाख ६, २०७४ 7:33:08 AM	मा प्रकाशित
काठमाडौं, ६ बैशाख/ क्रिष्टियानो रोनाल्डोको हृयाट्रिकको मदतमा साविकको विजेता रियल मड्रिड च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
मंगलबार राति भएको दोस्रो लेगमा रियल मड्रिडले १० खेलाडीमा सिमित बार्यन म्युनिखमाथि अतरिक्त समयको खेलमा ४-३ गोल अन्तरको जित हात पारेको हो ।
पहिलो लेगमा २-१ को जित निकोलेको रियल समग्रमा ६-३ को जितका साथ अन्तिम चारमा पुगेको छ ।
रियलको घरेलु मैदानमा भएको खेलको पहिलो निर्णायक समय ८४ मिनेट रहृयो, जतिबेला बार्यनका भिडालले रातो कार्ड पाए । त्यसपछि रोनाल्डोको अफसाइड ह्याट्रिक गोल । १०९ औं मिनेटमा गोल गर्दा उनी प्रष्ट अफसाइड थिए तर, उनको गोललाई मान्यता दिइयो ।
खेलमा अग्रता भने बार्यन म्युनिखले लिएको थियो । ५३ औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टीमा उसका रोबर्ट लोभान्डोस्कीले गोल गरे।
७६ औं मिनेटमा रोनाल्डोले बराबरी गोल फर्काए । तर, एक मिनेट नवित्दै रामोसले आत्मघाती गोल गरेपछि बार्यन म्युनिखले २-१ को अग्रता लियो ।
८४ औं मिनेटमा बार्यनले नराम्रो झड्का ब्यहोर्‍यो । उसका भिडालले दोहोरो पहेँलो कार्डसँगै रातो कार्ड पाए ।
तर, दुबै टोलीबाट थप गोल हुन सकेन र निर्धारित समयको रिजल्टले समग्रमा ३-३ को बराबरी भएपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलियो ।
अतिरिक्त समयको खेलमा रियल हाबी भयो । १०४ औं मिनेटमा दोस्रो गोल गरेका रोनाल्डोले १०९ औं मिनेटमा हृयाट्रिक पुरा गरे । उनले तेस्रो गोल भने प्रष्ट अफसाइड थियो । यससँगै रोनाल्डोले च्याम्पियन्स लिगमा १०० गोल पनि पुरा गरे ।
तीन मिनेट लगतै एसान्सिओले गोल गरेपछि रियल मडिड ४-३ ले विजयी भएको छ र च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम चारमा पुगेको छ ।
एथ्लेटिको मड्रिड पनि सेमिफाइनलमा
यस्तै लिसेस्टरलार्इ हराउँदै एथ्लेटिको मड्रिड पनि सेमिफाइनलमा पुगेको छ । मंगलबार राति भएको दोस्रो लेग १-१ को बराबरीमा सकिएको थियो । तर, पहिलो लेगमा निकालेको १-० को जितले एथ्लेटिकोलार्इ अघिल्लो चरणमा पुर्याएको छ ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, बैशाख ६, २०७४ 7:33:08 AM